Dooktar Abiy Ahimad hawaasni Raayyaa ittisa Biyyaaf dhiiga akka arjoomu waamicha dhiyeessan – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Dooktar Abiy Ahimad hawaasni Raayyaa ittisa Biyyaaf dhiiga akka arjoomu waamicha dhiyeessan
On Aug 5, 2021 165
Finfinnee, Adooleessa 29, 2013 (FBC)- Muummeen Ministira FDRI Dooktar Abiy Ahimad hawaasni Raayyaa ittisa Biyyaaf dhiiga akka arjoomuu fi manneen harka qalleeyyii akka haaromsuu waamicha dhiyeessaniiru.
Dooktar Abiy fuula Twiitara isaaniirratti akka ibsaniitti, hawaasni raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga akka arjoomuu fi manneen harka qalleeyyii haaromsuun ashaaraan magariisaa akka ka’aan waamicha dhiyeessaniiru.
Kanarra darbees oomishtummaan qonnaa guddachuu akka qabu kaasaniiru.
Hojiilee biiroo keenyaa humnaafi yeroo dabalataa kenninee haa hojjennu jedhan.
Mata mataatti waan nurraa eegamuu ol kan gummachinu taanaan waan hundumtuu ni sirrata jedhaniiru.
Yuunvarsiitiin Jimmaa buqqaatota Wallootti argamaniif deeggarsa garaagaraa Birrii…
Godinni Goojjam Bahaa barattoota kuma 10 bilisaan…
Oduu biyya keessaa9095